WAXA AAD U BAAHAN TAHAY INAAD KA OGAATO GALEGA - SOOSAARKA DALAGGA
Rootiga cawska (Galega) - ayaa iska leh caleenta dhirta weyn ee dhirta iyo geedo-qoyan oo ka mid ah qoyska legume. Waxa kale oo jira magacyo kale oo roodhida ah, sida rutevka, rue rue, forester.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo roodhida ah - Oriental iyo Medicinal. Inta badan xiiso leh waa wax soo saarka riyaha oriental, sababtoo ah waxay u adeegtaa sida dalagga wanaagsan ee dalagga.
Roodhiga Oriental waxa loola jeedaa dhirta asaasiga ah, maadaama uu leeyahay nooc ka mid ah nidaamka xididka. Waa wax aad u awood badan waxayna geli kartaa ciidda si qoto dheer ah 80 sentimitir. Nidaamka asaasiga ahi wuxuu ka kooban yahay asaas aasaas ah iyo tiro badan oo ka mid ah laamood oo leh shabakad aad u qoto dheer oo qotod ah oo ah xididada fiyuusta yar.
Caleemaha caanaha bariga ah waxay isu keenaan marka hore, iyo sanadka labaad ka dib markii ay beerto waxay helayaan midab madow. Nidaam xidid awood leh ayaa sidan loo sameeyaa: qoto dheer oo ah qiyaastii 7 sentimitir tiro ah oo carruur ah ayaa la sameeyay; kobaca waxay dhacdaa qadar ahaan, dhererkoodu wuxuu noqonayaa 30 centimitir; guga, sanadka soo socda waxay u yimaadaan dhulka dushiisa, sameynta caws.
Intaa waxaa dheer, ilaa 4 hindise geli foomka cusboonaysiinta foomka sanad walba dhulka ku saabsan qayb qayb ka mid ah afkoda, taas oo ka dhigi kartaa afkoda.
Hilibka Goos wuxuu leeyahay oo ku jira qadar badan oo boroti ah, carbohydrates iyo walxo kala duwan oo ash. Inta lagu jiro xilli sii kordhaya, qiimaha quudinta ee geedka waxay hagaajineysaa oo kordhisaa. Ka dib markii miraha bislaadaan, caleemaha iyo cawska afkoda ayaa weli cagaaran.
Ujeedada ugu muhiimsan ee caanaha lo'da ee bariiska waa waxqabadka quudinta. Waxaa loo isticmaalaa xoolaha, dhageerka, caleenta, diyaarinta dufnado kala duwan, kuwaas oo si cadiif ah loo qalajiyey oo leh tiro badan oo ah borotiinka iyo nafaqooyinka.
Nidaamka dabiiciga ah iyo qaabka cusub ee riyaha ayaa loo isticmaali karaa sida qaybta quudinta ee xoolaha kala duwan. Waxay noqon kartaa shumac aad u fiican oo loo isticmaalo briquettes sare, kalluun, cunto caws iyo goynta.
Kozlyatnik wuxuu bixiyaa mid ka mid ah cunnooyinka ugu horreeya (galley hore ee xilliga qaboobaha), marka dhirta iyo alfalfa ay galaan marxaladda soo socota ee horumarinta degdegga ah iyo koritaanka.
In arsenal, riyaha ayaa leh tamar xoog leh si ay u koraan, iyo sidoo kale awood u leh inuu isticmaalo cawska ilaa dhamaadka dayrta. Waxay leedahay geedi socod dheer oo qoyan, tanna, taasi waxay keenaysaa, cawskani waa mid aan lagama maarmaan u ahayn beerahooda wax soosaaraya.
Sidoo kale Marwo sidoo kale waa geedka malab wanaagsan. Qadar badan oo borotiinka ah maahan midda kaliyah ee nafaqada leh. Carbohydrateska iyo walxaha dabka xayawaanku waxay kuu oggolaanayaan inaad ilaaliso qiimaha sare ee quudinta inta lagu jiro xilliga daaqsinka.
Intaa waxaa dheer, riyaha ayaa u dulqaadanayaa si aad u fiican. Isaga awood u leh inay ku noolaadaan, noolaadaan oo horumariyaan heerkul ah -25 digrii.
Xaaladaheeda, riyaha ma ogaan karaan in ay siman yihiin oo xaq ahna waxay u qaadataa meesha cawska ugu fiican, labadaba cuntada iyo wax soo saarka malab, borotiin, walxaha borotiinka.
Sidaa darteed, wax dhib ah ma laha, maxaa yeelay waxay ku noolaan kartaa kulaylka iyo qabowga labadaba, horumarkiisana waa mid aad u degdeg ah, xididdadu waa awood iyo tayada alaabta marwalba waxay joogtaa kor.
Rooggu waa geedka aan caadiga ahayn, sidaas darteed wuxuu ku koraa meelo kala duwan. Tan iyo markii uu ku filan yahay qabow u adkaysta, waxay u soo bixi kartaa xitaa qoto dheer ee Siberia iyo qaar ka mid ah gobol qabow ee dalalka kala duwan ee adduunka.
Waqtiga ugu fiican ee sannadka beeritaanka riyaha ayaa noqon doona xilliga guga hore, marka badanaa dalagga gu'ga badiyaa waa la beeray. In ay beero ay riyaha ah ma aha picky, taas oo aan la sheegi karaa shuruudaha horumarinta iyo koritaanka warshadda.
Tani, marka la eego, waxaa lagu sharraxay xaqiiqda ah in caan bixiyaha uu yahay warshad iftiin leh oo u baahan qadar badan oo iftiin ah laftiisa natiijo wanaagsan oo dhalid. Intaa waxaa dheer, ma aha mid suurad wacan in la oggolaado abaarta on carradu meesha riyaha kora ama koraan. Aad bay muhiim u tahay marka dhirta la koro si looga hortago in ka badan-qoyaanka ciidda - qoyaanku waa inay noqdaan kuwo ku filan.
Hilibka Gooska waa isku dhafka ugu wanaagsan dhirta kale. Sidaas, oo ay weheliso dhir iyo dhir macaan, ma awoodi kartid inaad hesho dhalid aad u fiican, laakiin sidoo kale waxay ku kobcinaysaa ciidda beeritaanka dambe ee geedaha cagaaran ee kale. Sidaa darteed, Roogga adkaanta dabiiciga ah ee kale waxay noqon kartaa mid sareeya, iyo sidoo kale bogsiiyaha dhulka, maadaama ay burburinayso bakteeriyada xanuun leh. Sidoo kale riyaha ayaa nadiifin kara ciidda waxayna kordhin karaan wax-soo-saarkooda iyo wax-soosaarkooda.
Geediga riyaha waa in lagu sameeyaa safafka dhexe (10 illaa 15 cm), qoto dheeraana waa in uu gaaraa 6-7 cm. Intaas waxaa sii dheer, xaaladaha cimilada wanaagsan, badhitaanku wuxuu kobcayaa oo gaari karaa korodhka ugu sareeya, kaas oo horseedi doona wax soo saar wanaagsan.